internet address တွေကို မှတ်တဲ့ softwareလေးများရှိပါသလာ: — MYSTERY ZILLION
internet address တွေကို မှတ်တဲ့ softwareလေးများရှိပါသလာ:
December 2009 edited December 2009 in Freeware
window မှာ addressbook မှတ် သလို internet address ကို မှတ်တဲ့ address book များရှိနိုင် လားဟင်?
ကိုယ်.ကွန်ပျူတာနဲ .သုံးတာဆိုရင်တော. browser မှာ မှတ်ချင်တဲ.နေရာ ရောက်ရင် Ctrl+D နှိပ်ပါ။
software ဆိုရင်တော. မသိဘူးခင်ဗျ ။ bookmark မှတ်လို.ရတဲ.ဆိုက်တွေတော. ရှိတယ် ။ google က bookmarks ကိုသုံးလို.ရသလို www.xmarks.com , www.icyte.com လိုမျိုးဆိုက်တွေတော.ရှိတယ် ။ ဒါပေမယ်. လွယ်လွယ်ကူကူ သုံးချင်ရင်တော. google ကဟာပဲကောင်းတယ် ။ အကောင်.ရှိဖို.တော. လိုတယ်နော်။
Social Bookmaring ဆိုဒ်တွေရှိပါတယ်။
U can try following links
ဒီဟာလေးကိုလဲ စမ်းသုံးကြည့်ပါအုံးဗျာ ...
မြန်မာ ဘာသာဖြင့်လဲ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ ...
ကိုယ်မှတ်သားထားချင်တဲ့ website address တွေကို မှတ်ထားလို့ရပါတယ် ...
လူဘယ်ရောက်ရောက် website address ကို www.favoritus.com အကောင့်လေး၀င်ပီးတော့ ကိုယ်မှတ်ထားတာတွေကို အသုံးပြုနိုင်မှာပါ ....
archiviafile ဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးကြည့်ပါလားဗျ။ XP ရော7မှာ ရော ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်ဗျ။ နောက်ပြီး Portable လည်းဖြစ်ပြီး တစ်ခြားစက်တစ်ခုခုမှာ သွားသုံးရင်လည်း ကိုယ်မှတ်ထားတာတွေက ပျောက်သွားခြင်းမျိုးလည်းမရှိပါဘူးဗျာ။
This is very easy! IF you have an gmail account you will bookmarks on google.
The link is www.google.com/bookmarks . You can make with your idea.